dimanche, 15 octobre 2017 18:48
Antsohihy: Miomana amin’ny fandalovan’ny nofo mangatsiakan’i Pr Zafy Albert
Misy ny fanentanana amin’ny fanadiovana, narahina famonoana alika faobe halina, hisorohana amin’ny fisian’ny valanaretina pesta, ary koa fiomanana amin’ny fandalovan’ny nofo mangatsiakan’ny Filoha teo aloha, Pr Zafy Albert eto an-drenivohitry ny Faritra Sofia.
dimanche, 15 octobre 2017 18:40
Araka ny didim-pitondrana 014/2017/Res-Ats navoakan’ny Faritra Atsinanana ny zoma 13 oktobra 2017 dia hisokatra ny alatsinainy 16 oktobra amin’ny enina ora maraina ny taom-piotazana jirofo.
Mamokatra an’arivony taonina isan-taona ny Faritra Atsinanana, ary vokatra isany mampidi-bola amin’ny Faritra izy amin’ny tamberimbidy sy haba samihafa.
Velona ahiahy anefa ireo mpandraharaha manoloana ny fisian’ny valan’aretina pesta ao amin’ny faritra Analanjirofo sy Atsinanana, sao hiteraka fatiantoka goavana ho an’ireo mpanangom-bokatra sy ny tantsaha toy ny tamin’ny taona 2000 nisian’ny valanaretina kôlera indray.
dimanche, 15 octobre 2017 17:54
Sambava: Mitombo hatrany ny sakan-dalana
Tamin'ny lalana mampitohy an'i Sambava-Tanambao Daoud no nahitana izany omaly sabotsy 14 oktobra atoandro.Tsy afaka nijanona ny fiara rehetra izay nandalo teto fa tonga dia namaky ilay sakana izay tsy fantatra iza no tao ambadika ary saika hanao inona?
Ity lalana ity no azo lazaina fa handalovan'ny vola betsaka amin'ireo tantsaha mpamboly lavanila avy amin'ny vohitra Ambatojoby sy Tanambao Daoud.
dimanche, 15 octobre 2017 17:14
Antsirabe: Rongony 50kg saron'ny Polisy
Rongony nanodidina ny 50 kilao no saron’ny polisin’Antsirabe ny marainan’ny alarobia 11 oktobra tokony ho tamin’ny 7 ora maraina, teo ambodin’Andranomaimbo-Antsirabe.
Niainga avy tany Vangaindrano ireto rongony 2 valizy sy 5 gony ireto ka saika haondrana teto Antsirabe no sarona noho ny fahazoam-baovao nialoha azon’ny Polisy. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa 80.000 ariary no hividianan’ireo mpiantoka ny rongony ny iray gony any Vangaindrano ary 60.000 ariary kosa ny hamarotana ny kilao eto Antsirabe.
Efa tamban-jotram-pianakaviana amin’ny famarotana sy fitsinjarana rongony moa ireo nikasa handray izany, raha ny fanazavana nomen’I Kaomisera Divizionera Ramilison Céléstin. Ankoatra ny rongony moa dia mbola nahatratrarana basy vita gasy iray sy bala ana calibre 12 niisa roa moa ny tompon’ireto rongony ireto.
Olona 04 efa araka izany no natolotra ny fampanoavana ny marainan’ny alakamisy teo dia ireo olona 2 nitondra ny rongony avy any Vangaindrano ary ireo olona roa nikasa handray izany teto Antsirabe.
dimanche, 15 octobre 2017 16:59
Villa La Franchise Ivandry: Fahatongavan'ny vatana mangatsiakan'i Zafy Albert
Vao nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny sabotsy 14 oktobra 2017, dia nentina avy hatrany nihazo ny tranony tao amin'ny Villa La Franchise Ivandry ny nofo mangatsiakan'i Filoha teo aloha Albert Zafy.
Tonga nitsapa alahelo ny fianakaviana ireo andrimpan-jakana sy tompon'andraikitra ambony eto amin'ny Firenena.
Ny Razana moa dia entina etsy amin'ny fiangonana Katolika Antanimena anio alahady 15 oktobra amin'ny 9ora maraina, alohan'ny hitondrana azy eny amin'ny Palais des sports ahafahan'ny rehetra manome voninahitra farany an'i Profesora Filoha Zafy Albert ary mamangy sy mankahery ny fianakaviana.